Fundamentals of General Management – Coursecom
ရုံးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် လူအများစုနှင့်လုပ်ကိုင်ရသော နေရာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာ(Management) အကြောင်း သင်ခန်းစာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာ မှာ လေ့လာရမှာ တွေကတော့ စီမံခန့်ခွဲ မှု ဆိုတာ ဘာအတွက် လုပ်ဆောင် …
Ks 25,000	TAKE THIS COURSE
ရုံးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် လူအများစုနှင့်လုပ်ကိုင်ရသော နေရာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာ(Management) အကြောင်း သင်ခန်းစာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာ မှာ လေ့လာရမှာ တွေကတော့ စီမံခန့်ခွဲ မှု ဆိုတာ ဘာအတွက် လုပ်ဆောင် ရပြီး ဘယ်လို အရာတွေ ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲ မှု လို့ ခေါ် တွင် ကြောင်း က စတဲ့ အခြေခံ စီမံခန့်ခွဲမှု သီအိုရီများကိုလေ့လာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာ့အတွက် ယခု သင်ခန်းစာကို လေ့လာဖို့လိုသလဲ ?
ဒီသင်ခန်းစာက ဘယ်အလုပ်မှာ မဆိုလိုအပ်လှတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေ ခံများ မန်နေဂျာ ကောင်း တစ်ယောက် အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ရှိ ၀ိသေသ များ နှင့် မတူကွဲပြားမှု များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းတုိုးချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အား လေ့လာ ကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သူတွေ လေ့လာသင့်သလဲ ?
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင် များ ရုံးဝန်ထမ်းများသာမက စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရမည့်သူများ အား လုံးလေ့လာသင့်ပါသည်။
ATDWJanuary 1, 2019 at 6:34 amReply
After finishing this course, I got many knowledge of ‘management’. Your video lessons are very clear to understand. Thanks million to Sir KHS and teacher WMK.